«Dhaqdhaqaaq leh»: 5 istiraatiijiyad daqiiqad ah oo loogu talagalay ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
«Dhaqdhaqaaq leh»: 5 istiraatiijiyad daqiiqad ah oo loogu talagalay ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Qalabka falanqaynta farsamooyinka caadiga ah ee ka muuqda dhammaan meheradaha ganacsiga ayaa ah habka ugu kalsoon ee sida ugu macquulsan ee lacag looga helo ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah . Istaraatiijiyadda "Dynamic" ayaa caddaynaysa tan iyada oo la adeegsanayo tilmaame isbeddel iyo qiimeyn ku saabsan dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa qiimaha.
Istaraatiijiyaddu waxay isticmaashaa laba tilmaamood oo heer sare ah:
Kooxda Bollinger (BB). Tilmaamuhu wuxuu ka warbixinayaa jihada iyo isbeddelka isbeddelka hadda socda, iyo dhaqdhaqaaqa jiifka ah ee khadadka ayaa muujin doona fidsan - xaaladdan, waxaa fiican in laga fogaado suuqa, gaar ahaan haddii qiimaha uu ku socdo marin cidhiidhi ah. Marka baaxadda ay si baaxad leh u ballaadho, waxaad isticmaali kartaa muddo dheer 10-15 daqiiqado ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo aad ku kordhin karto mugga macaamilka ilaa 10-15%.
Index Index Commodity (CCI) . Waxay muujineysaa dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa qiimaha ama sida ugu dhakhsaha badan ee isbeddelka hadda socda uu u korayo ama u dhammaanayo. Sidaad ogtahay, qiimaha dhammaan hantida ganacsiga (lacagaha, saamiyada, mustaqbalka, indices) waxay si isdaba joog ah ugu dhex socdaan inta ugu badan / ugu yar ee maxalliga ah. Istaraatiijiyadda, "Dynamic" waxaa loo isticmaalaa sidii xaqiijinta calaamadaha ganacsiga ee labada shirkadood ee Bollinger Bands.
Ikhtiyaar (CALL) ikhtiyaar. Qiimuhu wuxuu ka durkay xadka hoose ee Bollinger ama wuxuu jabayaa khadka dhexe ee hoose ilaa kor. Index Index Commodity wuxuu ka sarreeyaa heerarka eber.
Tilmaamaha CCI wuxuu tilmaamayaa in hantida xad dhaaf ah (taasi waa, waxay mudan tahay in la sugo hoos u dhac) haddii xariiqa uu ka sareeyo heerka (+ 100), iyo inuu la sii badiyo (sugitaanka koritaanka) haddii xariiqa uu ka hooseeyo heerka (-100) ).
Fall (PUT) doorasho. Xaaladaha soo noqnoqda: sicirku kama badin xadka kore ee Bollinger ama qiimaha ayaa dhexda ka jabiya kor ilaa hoos. CCI waxay ka hooseysaa eber.
Fur ganacsi shumaca xiga ka dib markaad calaamadaha binary ganacsiga . Waqtiga dhicitaanka ee ikhtiyaariyada waa in uusan ka yarayn 10-15 daqiiqadood xitaa haddii sida waqtiga shaqada loo doorto daqiiqad, sida fiidiyowgeena.
Markay sii dheeraato dhaqdhaqaaqa dhinac ee kooxaha Bollinger ayaa sii kordhaya, waxay u badan tahay suurtagalnimada isbeddel xoog leh ka dib dhammaystirkiisa. Xaaladaha noocaas ah, aad ka furan kartaa Xirfado at calaamadaha ugu horreeya ee dib u noqoshada CCI ah oo xoog badan fursadaha binary calaamadaha ku nool ka vfxAlert ;
Haddii ay jirto isbeddel joogto ah, waxaad furi kartaa dhowr ikhtiyaar oo leh taariikho dhicitaan oo kala duwan si aad u qaadatid dhaqdhaqaaqa ugu sarreeya ee khatarta ugu yar. Haddii dallaalku kuu oggolaado inaad xirato ikhtiyaarka ka hor taariikhda dhicitaanka, markaa hubaal waan hagaajin doonnaa macaamilka (xitaa haddii ay faa'iido tahay!) Muuqaalka calaamadda ka soo horjeedda!
Ganacsi otomaatig ah marka loo eego istiraatiijiyadda “ Dynamic ” waa suurtagal: dhowr nooc oo ah ikhtiyaari ikhtiyaari ah waxaa laga heli karaa shabakadda, laakiin, sida nidaam kasta oo wax lagu nadiifiyo, way ka wanaagsan tahay in gacan looga ganacsado iyadoo la adeegsanayo qorshahan. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad si wax ku ool ah u hagaajiso nidaamka isbeddelada suuqyada, iyo hantida badan ee istiraatiijiyaddu waxay kuu dammaanad qaadaysaa faa'iido deggan maalin kasta.